Empeleni kufanele umuntu alibuke futhi alisebenzise kanjani iBhayibheli ngendlela ehambisana nentando kaNkulunkulu? Yini ukubaluleka kokuqala kweBhayibheli? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Okwedlule：Yini ngempela inkolo yeqiniso kuNkulunkulu? Kufanele umuntu akholwe kanjani kuNkulunkulu ukuze athole ukutuswa Kwakhe?
Okulandelayo：Ingabe ngempela umuntu kufanele alizwe kanjani izwi likaNkulunkulu? Ingabe umuntu angaqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu ngempela nguNkulunkulu uSomandla yiNkosi uJesu ebuyisiwe?
Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Lonke uhlelo Lwami lokuphatha, uhlelo oluhlanganisa iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, lunezigaba ezintathu, n…
3. Ubudlelwane Phakathi Kwesigaba Ngasinye Somsebenzi KaNkulunkulu. Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Kusukela emsebenzini kaJehova kuya kokaJesu, futh…